Muri pano: musha / 0x800f0986 / GADZISA: Windows Gadziridza chikanganiso 0x800f0986
Vazhinji vashandisi vakatumira pane Microsoft forum pane 0x800f0986 Windows Update kukanganisa. Iko kukanganisa kunomuka kana ivo vachiedza kutora ekuwedzera patch inogadzirisa kuburikidza neSystem mukati Windows 10 1909.
Panzvimbo yekukodha pasi izvo zvinogadziriswa, Zvirongwa zvinoratidzira an Kugadzirisa kwakundikana kukanganisa kukanganisa pamwe neiyo 0x800f0986 kodhi Nekuda kweizvozvo, vashandisi havakwanise kutora zvakasiyana siyana zvigamba zvekugadzirisa Windows 10.
Ndogadzirisa sei Windows Gadziridza kukanganisa 0x800f0986?
1. Tarisa iyo Windows Gadziridza sevhisi inogoneswa
Chindai Windows key + R kudimbudzira keyboard.
chiyamuro services.msc mubhokisi Rakavhurwa, uye tinya pinda bhatani.
Kanda kaviri Windows Kwidziridzo kuvhura zvivakwa zvayo hwindo.
Dzvanya iyo Startup mhando yekudonha-pasi menyu kuti usarudze otomatiki.
Chindai kutanga bhatani pahwindo rezvivakwa.
Click Shandisa, uye chengeta OK kubuda nepahwindo.
2. Zarura Windows Gadziridza chinetso
Open Windows 10'bhokisi rekutsvaga.
Nyora zita repakati troubleshoot mune yekutsvaga yekushandisa.
Click Dambudziko rekugadzirisa, ichavhura iyo Zvirongwa app sezvakaratidzwa zvakananga pasi apa.
Sarudza iyo Windows Gadziridza chinetso.
Baya Run the troubleshooter bhatani rekuvhura hwindo mune snapshot rakananga pazasi.
Sarudza iyo Shandisa izvi kugadzirisa sarudzo yechinhu chero chipi zvacho chakurudzirwa.
3. Bvisa kunze SoftwareDistribution folda
Misa iyo Windows Gadziridza sevhisi nekudzvanya iyo mira bhatani pane zvaro hwindo.
Baya Faira Explorer bhatani pane yebasa rebasa.
Vhura iyi nzira yefolda:
C:> Windows > SoftwareDistribution> Dhawunirodha.
Dzvanya iyo Ctrl + A hotkey yekusarudza zvese zvirimo mufolda iyoyo.
Chindai Kudzima bhatani.
Baya kutanga bhatani pane Windows Gadziridza sevhisi yezvivakwa hwindo.
4. Dzosera Windows Update
Vhura bhokisi rekutsvaga ne Windows kiyi + S hotkey.
chiyamuro cmd mubhokisi rokutsvaga.
Kungofa Raira Prompt uye sarudza Mhanya semutungamiri kuti avhure pamwe neakakwidziridzwa kodzero dzemushandisi.
Isa iyi mirairo yakapatsanurwa muwindo raMira Prompt:
Net kumira mabheti
Isa mutsara unotevera mu Command Prompt, uye tinya Bhatani bhatani bhatani.
Isa Ren C:WindowsMaitiro raira, uye cindezela bhatani re Enter.
Mushure maizvozvo, isa iyo iyi mirairo yakaparadzana:
Kutanga kutanga wuauserv
Net kutanga mabheti
Kutanga kutanga msiserver
Reboot desktop yako kana laptop.
5. Dzivirira wechitatu-bato antivirus zvinoshandiswa
Kanganiso 0x800f0986 inogona kunge iri nekuda chechitatu-bato antivirus zvinoshandiswa kuvharira zvinyorwa zvinowedzera. Saka, kudzima antivirus software inogona kugadzirisa chikanganiso.
Kuti uite izvozvo, tinya kurudyi antivirus utility's system tray icon kuti uvhure menyu yezvimiti kubva kwaunowanzo sarudza sarudzo iyo inodzima software.
Iwe unogona zvakare kubvisa antivirus utility kubva kune system yekutanga pane Task Manager's Startup tab saka haizotanga na Windows 10. Wobva waedza kurodha zvigamba zvekare nemaantivirus software akaremara.
Chirongwa chekudzivirira chinogona kukupa kuchengetedzwa kubva kune malware, saka tarisa chinyorwa ichi kune iwo akanakisa.
6. Dzosera Windows 10
Isa iro rinokosha Dzokerazve mubhokisi rekutsvaga pachikuva.
Click Sarudzazve iyi PC kuvhura iyo Yekudzorera tebhu muZvirongwa.
Baya kuti Started bhatani rekuti uvhure Reta iyi PC.
Sarudza iyo Chengeta mafaira angu kuita.
Chindai Next bhatani kuti uende.
Click itangezve kuti asimbise.
Cherechedza: Iyi nzira ine yakanyanya kubudirira mwero yekugadzirisa yakanyanya kunaka chero Windows 10 nyaya. Nekudaro, inouya pamwe neiyi yekudzoka yekubvisa yako yese data. Saka, zvakanaka kugadzira a negadziriro yeparutivi usati waenderera neiyi mhinduro.
Nekutevera aya matanho, iwe unofanirwa kukwanisa kubvisa iyo Windows Gadziridza kukanganisa 0x800f0986 pasina nguva.